शिक्षित वर्गः अपेक्षा र सामाजिक दृष्टिकोण « epurwa
प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७६, शनिबार १३:३४
कुनै पनि मुलुकको प्राण भनेकै शिक्षा हो भन्ने गरिन्छ । शिक्षा तेस्रो आँखा हो । शिक्षित समाज सभ्य कहलाउँछ । शिक्षाले समाजमा चेतनाको ज्योती जगाउँछ । फैलाउँछ । शिक्षित मानिसले आँफै दियो झैं जलेर समाजमा प्रकास फैलाउँछ । शिक्षित वर्ग उच्च नैतिक आचरण र मान्यताको मानक हो । यो वर्गका हरेक व्यवहार र आचरण अनुकरणयोग्य हुन्छन् । उनीहरू तथ्यमा आधारित सत्य ओकल्न कत्ति पनि हिच्किचाउँदैनन् । ज्ञानप्रतिको मोह नै उनीहरूको वास्तविक परिचय हो । शिक्षितवर्गप्रति समग्र समाज जहिल्यै आड भरोसा गर्छ । यो वर्ग भनेको इमान्दार हुन्छ । तोकिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न आतुर हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताबाट ओतप्रोत हुन्छ । पारदर्शिता र सदाचारिता उसका जीवन शैली हुन् । यो वर्ग छलकपट र षडयन्त्र पटक्कै रूचाउँदैन । भ्रष्टाचारको त “भ”सम्म सुन्न मान्दैन । श्रमको उच्च सम्मान गर्छ । श्रमिक वर्गलाइ पुजा गर्छ । त्यसकारण शिक्षित वर्ग समाजको गहना हो । अमुल्य निधि हो । पथ प्रदर्शक हो । अनुकरणीय वर्ग हो । भरोसायोग्य वर्ग हो । निरन्तर खोज, अनुसन्धान, अध्ययन र चिन्तन मनन् उसका जीवन पद्धति हुन् । त्यस्तो अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवमा टेकेर पत्ता लगाएको नवीन सत्य व्यावहारिक रूपमै प्रचार प्रसार गर्नु शिक्षित वर्गको अपेक्षित कर्म हो । जुन बौद्धिक कर्मले समाज रूपान्तरणमा अतुलनीय योगदान पुर्याउछ । त्यसैले शिक्षित वर्ग समाजमा जहिल्यै पुजनीय हुन्छ । प्रतिष्ठित वर्ग कहलाउँछ । उन्नति र प्रगतिको पर्यायको रूपमा चिनिन्छ । समाजका हरेकजसो समस्या समाधानमा यो वर्गले विवेकपूर्ण निर्णय लिन्छ । सही न्याय प्रदान गर्छ । सायद शिक्षित वर्गप्रति धेरैको बुझाइ यस्तै यस्तै होला भन्दा पक्कै पनि अतिशयोक्ति नहोला ।
तर यति शुन्दर सैद्धान्तिक जगमा उभिएको समग्र समाजकै पथप्रदर्शक मानिने यस्तो शिक्षित वर्गप्रति नेपाली समाज चाहिँ किन दिनप्रतिदिन यति धेरै नकारात्मक बन्दै गएको होला ? विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा यो वर्गका सम्बन्धमा आजभोली किन यति धेरै नकारात्मक समाचार छाइरहेका होलान् ? यस्ता प्रश्नले आफूलाइ शिक्षित वर्ग भन्न रूचाउने शिक्षक, प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, आदिको मन पक्कै पनि अमिलो भएको हुनु पर्छ । माथि नै उल्लेख गरिए जस्ता शिक्षित वर्गका अपेक्षित विशेषता वास्तविक व्यवहारमा अनुभुति हुन नसकी यो वर्गका सम्बन्धमा त्यसको ठीक विपरित सन्देश प्रवाह भइरहेको वर्तमान अवस्थाले यो वर्गको मन भत्भति पोलेको हुनु पर्छ । शिक्षित वर्गप्रतिको बढ्दो नकारात्मक सोच र दृष्टिकोणको पारो थप चढ्दै जाने हो भने यो वर्गको शाख हत्तपत्त उठ्नै नसक्ने गरी नराम्ररी गिर्ने खत्तरा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
स्वयं शिक्षित वर्ग दिनप्रतिदिन आफ्नै गिर्दो शाख जोगाउन तत्काल नजाग्ने हो भने उ कहिँ न कहिँ पुगेर नराम्ररी बल्ड्याङ खाने निश्चितप्रायः देखिन्छ । शिक्षितवर्ग कहलिएका केही व्यक्ति शिक्षालयमा भएका गलत कर्मकै कारण पाँचतलामाथिबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्न थालेका समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छाउन थालिसेकेका छन् । शिक्षितवर्गकै भीडले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका हिरासत खचाखच हुन थालिसकेका छन् । यी केही प्रतिनिधि घटना शिक्षित वर्ग नराम्ररी बल्ड्याङ खान थालेका ताजा उदाहरण हुन् भन्दा खासै फरक नपर्ला ।
अनि यसरी आफ्नै शाख र इज्जत समेत जोगाउन हम्मे हम्मे पर्दै गएको शिक्षित वर्गका लागि राजनीतिक नेतृत्वले मुलुक बर्बाद गरे भनेर कुर्लने नैतिक जमिन बाँकी रहन्छ कि रहँदैन ? कमजोड नैतिक धरातल भएको शिक्षित वर्गले राजनीतिक नेतृत्वप्रति चोर अौलो ठड्याउँदा बाँकी चार अौलाले आँफैलाइ गिज्याइरहेको दृश्यलाइ अन्देखा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? पक्कै पनि मिल्दैन । त्यसकारण शिक्षित वर्गले राजनीतिक नेतृत्वका सम्बन्धमा टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला त आफ्नै गिर्दो शाख र प्रतिष्ठा उकास्न बिशेष मेहनत गर्नैपर्ने बस्तुगत परिस्थिति पैदा भएको छ । आफ्नै वर्गप्रति बन्दै गएको नकारात्मक सामाजिक दृष्टकोण उल्ट्याउन शाहसिक कदम चाल्न धेरै नै ढिला भइसकेको छ । शिक्षित वर्गका न्युनतम अपेक्षा समेत पूरा गर्न नसकी नराम्ररी थला परेको स्वयं शिक्षित वर्ग हावी हुने शिक्षालय, न्यायलय, पत्रकारजगत, निजामति प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, उद्योग व्यावसाय, आदिमा नेपाली समाजको महारोग बन्दै गएको भ्रष्टाचारले जरा गाडेका डरलाग्दा समाचार दिनहुँजसो विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छाउनु भनेको आफूलाइ बडेबडे डिग्रीधारी शिक्षित वर्ग भन्न रूचाउनेहरूका लागि अत्यन्तै लज्जा र चुनौती को विषय होइन र ?
त्यसकारण शिक्षित वर्गले दुनियाँलाइ अनावश्यक गाली गर्न छाडेर आ—आफ्ना क्षेत्रलाइ अनुकरणीय, विश्वस्नीय, र भरोसायोग्य बनाउने अभियान तत्काल छेड्न सकेमा मात्र शिक्षित वर्गलाइ हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण बदलिन सक्छ । आफूलाइ शिक्षित वर्गको कोटीमा राख्न चाहने हरेक व्यक्तिले यो सत्यलाइ पटक पटक सोचौं । मनन गरौं । परिवर्तनको यात्रा स्वयं आफूबाट शुरू गरेर समाजमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरौं । यस्तो शाहसिक कदम तत्काल चालौं । माथि उल्लेख गरिएजस्ता शिक्षित वर्गका अपेक्षित बिशेषता व्यवहारमा उतारेर शिक्षित वर्गप्रति दिन प्रतिदिन बन्दै गएको नकारात्मक दृष्टिकोण उल्ट्याउन कुनै कसर बाँकी नराखौं । चेतना भया ।